Zvandinoita Kana ukasangana yedu mapatya mweya?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Zvandinoita Kana ukasangana yedu mapatya mweya?
Twin Soul munhu zvechokwadi [3500 Yen Free yokunyatsoongorora] kuti vafemberi pamusoro kuti nzira
ishamwari yake hazvirevi kurarama nguva dzose panguva imwe chete rini uye nyika chete. Kazhinji anodzokorora nekusarangarira yoga vapenyu. Kunyange kana taikwanisa kusangana mapatya mweya munyika ino zviri kuva pedyo kuti chishamiso, uye ari zvakare testamendi mweya mumwe yawedzera imwe yepamusoro padanho kubudikidza mutsekwende.
Naizvozvo, ini nevanhu sokuti mapatya mweya, ngatiende mufaro wakachena kuti akakwanisa kusangana ishamwari yake. Apo ndakasangana kwete chete yavo, unofanira kufara kuzoonanazve mupikisi. Kuti kunzwa nokutendeseka vakanyorwa, kubudikidza wezvikamu vachiziva kuti ndiyo mapatya mweya mumwe, zvichaita mweya yakanga akadzungaira pakati yakareba nhema mukati nyore munobuda kurutivi mufaro kuva mumwe.
mapatya Seoul sezvo apo vose
? mumwe kana iwe takaroorana ndiyo nyaya nevakawanda
mapatya Seoul nazvo kuti akaroora munhu, zvinonzi kana mweya rakura kukurira zvinoverengeka iwe. Nokuda kwechikonzero ichi, kakawanda ari nguva tinosangana kana masvika imwe dhigirii upenyu. Kana ndakasangana inyaya zvakafanana ndiko chokwadi kuti mumwe kana vose vakanga vakaroora.
nemuvengi kana chiso chake kunyatsofunga uye vasati vachimhanya vari ukama, uye kunyange nyaya vaiva vadyidzani yakatengwa muna kana, hamungagoni kukonesa mapatya mweya kukwezva mumwe. Zvisinei, unofanira kudzivisa rurege kubatwa mu nyaya, vachifungawo naye muri ikozvino. Chokutanga, akatarisana kubva mberi kusvika zvaitika yavo, tinofanira kuramba zvishoma nezvishoma uye nokungwarira kuita vanhu vaviri. Izvi zvakare vaiona kuva dambudziko kwakaitwa mapatya mweya, ngatiendei kuwana pamusoro kuwana zvakanakisisa nzira.
? mugumo dzinopindira
mapatya mweya kuti murege kutiza uye kuvharidzira kuti ari kuti ari anenge chishamiso, ndakasangana Kubva yokuti vanonzwa simba kukanganisa panguva, panewo nyaya kuti kuguma atiza kuti zvinorayirwa mwoyo wangu ndinonzwa kuti mugumo. Asi hazvina chete ndiro shoko mugumo sezvo nhovo. Nekuti ndiwo mugumo, ndiri kuedza Omoikomo kuti tinofanira vanhu vaviri akuvadzwe zvakapoteredza vaungana.
sokurondedzerwa kumusoro, mamiriro ezvinhu asina akasungirirwa kunyange kuda ungasungwa kuvhenekwa rakapiwa vanhu vaviri. Kukurira iyi, uyewo kuti kukura mweya mumwe yepamusorosoro, chete kubvuma zvakanaka mamiriro ezvinhu pane akanga atiza, chinhu chakakosha kuti kuronga.
kwete chete rudo uye kuroorana pamwe mapatya mweya ndiye chinangwa, kwete hazvo kuva mumamiriro ezvinhu iyo kwakabatana nokubvumira kuenda kunyange sezvo pandaisangana mapatya mweya. Chokwadi, zviri nyore kutaura pamberi mufaro chii akasangana, kana kwete vakanyatsoshongedzwa zvakatipoteredza kana vanhu vaviri vari akasungirwa, zvakakosha zvakasimba kutarisana nemamiriro ezvinhu.
Uyezve, chete rudo ukama kana kuroorana senzira kufamba mapatya mweya hausi chinangwa. Zvaisazova mumwe siyana yokuenda mumwe zvinoisa sezvo yakanakisisa shamwari hwose.
Kana kwete, zvakakosha zvakasimba kutarisana nemamiriro ezvinhu.